သှေးနုသားနုကလေးအမနေဲ့ မလိုကျအောငျ က ထားတဲ့ အမိုကျစားကကှကျတှနေဲ့ ခငျလှမျး ရဲ့ဗီဒီယို – Shwe Likes
အနုပ ညာလောကမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာ တိုငျအော ငျ ရပျတညျေ အာငျမွငျနပွေီး ပရိသတျအားေ ပးမှုကို အခိုငျအမာ ရရှိထားတဲ့ သရုပျဆောငျ စညျဖွိုးကို သိကွမယျထငျ ပါတယျနျော။ ဒါ့အပွငျ ကွညျနူးေ ပျြာရှငျစ ရာကောငျးတဲ့ အိမျထောငျေ ရးလေးကို ပိုငျဆိုငျထား
ကာ ပရိသတျတှေ အားကနြေ ရတာပါနျော။သူတို့ဇနီးေ မာငျနှံက ဝါသ နာပါရာ အနုပညာအလုပျတှကေို အတူတူ ကွိုးစားလု ပျကိုငျေ နကွတဲ့ အနုပညာရှငျတှေ လညျး ဖွဈပါတယျ။ ပရိသ တျတှကေလညျး သူတို့ဇနီးမောငျနှံကို အားကခြဈြခငျနရေ တာပါေ နျာ။ စညျဖွိုးက
လညျး ဇနီးဖွဈ သူခငျလှမျးကို ကွငျနာမှုတှအွေ ပညျ့အဝပေး ကာ မကျြစိအော ကျကအပြောကျမ ခံအောငျ ခဈြခွငျးမေ တ်တာတှပေေးထား တာလညျးဖွဈပါတယျ ။ အခုဆိုရငျ ခဈြစရာ သမီးလေးကို ပိုငျဆိုငျ ထားရလို့ ပိုလို့တော ငျပြျောရှငျကွညျနူးေ နကွတာပါ ။ သမီးလေးရဲ့
ပုံလေးတှကေိုလညျး အမွဲဖျောပွေ ပးလရှေိ့ ပါတယျနျော။ ဒီနမှေ့ာလညျး ခငျလှမျးက အမိုကျစားက ကှကျလေးနဲ့ ကထားတဲ့ ဗီဒီိယိုေ လးကိုတငျလာခဲ့တဲ့ အပျေါမှာလညျး ကလေးအေ မဖွဈပွီး အောကျပိုငျးကိုပဲအ သားပေး က နတောကွောငျ့ ဝဖေနျမှုတှနေဲ့ ပှဲဆူနတောဖွဈ
ပါတယျနျော… ပရိသတျကွီးလညျးခငျလှ မျးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကွညျွ့ ပီးအားပေးစကားေ လး ရေးပေးစကားလေး ရေးပေးသှား ကွပါအုံးနျော.. Source: Khin Hlwan
အနုပ ညာလောကမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အော င် ရပ်တည်ေ အာင်မြင်နေပြီး ပရိသတ်အားေ ပးမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးကို သိကြမယ်ထင် ပါတယ်နော်။ ဒါ့အပြင် ကြည်နူးေ ပျာ်ရွှင်စ ရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ေ ရးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထား
ကာ ပရိသတ်တွေ အားကျနေ ရတာပါနော်။သူတို့ဇနီးေ မာင်နှံက ဝါသ နာပါရာ အနုပညာအလုပ်တွေကို အတူတူ ကြိုးစားလု ပ်ကိုင်ေ နကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသ တ်တွေကလည်း သူတို့ဇနီးမောင်နှံကို အားကျချစ်ခင်နေရ တာပါေ နာ်။ စည်ဖြိုးက
လည်း ဇနီးဖြစ် သူခင်လွှမ်းကို ကြင်နာမှုတွေအြ ပည့်အဝပေး ကာ မျက်စိအော က်ကအပျောက်မ ခံအောင် ချစ်ခြင်းမေ တ္တာတွေပေးထား တာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဆိုရင် ချစ်စရာ သမီးလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားရလို့ ပိုလို့တော င်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးေ နကြတာပါ ။ သမီးလေးရဲ့
ပုံလေးတွေကိုလည်း အမြဲဖော်ပြေ ပးလေ့ရှိ ပါတယ်နော်။ ဒီနေ့မှာလည်း ခင်လွှမ်းက အမိုက်စားက ကွက်လေးနဲ့ ကထားတဲ့ ဗီဒီိယိုေ လးကိုတင်လာခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာလည်း ကလေးအေ မဖြစ်ပြီး အောက်ပိုင်းကိုပဲအ သားပေး က နေတာကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ပွဲဆူနေတာဖြစ်
ပါတယ်နော်… ပရိသတ်ကြီးလည်းခင်လွှ မ်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ြ ပီးအားပေးစကားေ လး ရေးပေးစကားလေး ရေးပေးသွား ကြပါအုံးနော်.. Source: Khin Hlwan